नखाएको ऋणमा ७ वर्ष जेलबास, मुटु चलाउन ब्याट्रीको सहयोग – BikashNews
नखाएको ऋणमा ७ वर्ष जेलबास, मुटु चलाउन ब्याट्रीको सहयोग
२०७६ पुष १३ गते २०:३० शिव सत्याल
काठमाडौं । ‘ठ्याक्कै घर त मलाई पनि थाहा छैन, यहीँ नजिक हुनुपर्छ, म सोधेर आउँछु है,’ सानागाँउ चोकबाट साँखु रोडतिर अलिकति ओराले झरेपछि बाइक रोक्दै उनले भने ।
उनी, अर्थात् सागरराज खड्का । कालो रंगको बाइक हेलमेटविनै चलाइरहेका थिए । साँझको ५ बजिसकेको थियो । पुसको ७ गते । जाडो निकै थियो । कालोपत्रे गर्न ठिक्क पारिएको सडक । धुलो पनि उडिरहेको थियो ।
सागर एउटा घरमा छिरे । हामी मोटरसाइकल रोकेर उनलाई पर्खिरह्यौं ।
‘ऊ त्यो जस्ताको टहरो छ नि ! त्योभन्दा अगाडिको घर रहेछ,’ उनले घर पत्ता लगाएछन्, अनि हामीलाई सुनाए । बाइक केही अगाडि बढायौं ।
केही अघि बढेर एक तले घर अगाडि रोकियौं ।
‘ठिकै छ बाबु ! तर, मैले राम्ररी चिनिनँ नि !’ घर छिर्ने ढोका नजिकैको गाईगोठसँगै रहेको धारो बन्द गर्दै करिब ५०–५५ वर्ष जतिका वयस्क व्यक्ति जवाफ दिदै थिए ।
त्योभन्दा अगाडि सागरले नमास्कारदेखि सन्चो विसन्चोको औपचारिक प्रश्न उनीसँग सोधिसकेका थिए ।
‘म सुवेदी गाउँको सागर हो अंकल, सागर खड्का,’ सागरको यो परिचयले पनि उनले चिने जस्तो गरेनन् ।
‘पुस्कारराज खड्काको छोरा, तपाईं र मेरो ड्याडी सात वर्ष सँगै जेल बस्नु भएको होइन र ? हजुर नै होइन र रघु कार्की ?’ सागरले आफ्नो परिचय थपे ।
‘ए… ! पुस्कारको छोरा ? ९ करोडको कम्पनी भएको व्यक्तिले आफ्ना गाउँले सजिलै कहाँ चिन्छ र ?’ ती वयस्कले हास्दै भने । उनले यसो भन्दै गर्दा उनकी श्रीमती पनि हाँसिन् । र, हामी पनि ।
अब हामीले भेटेका थियौं– रघु कार्की । उनी २३ फागुन २०६६ मा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सबाट ९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको आरके स्टील एण्ड फर्निचर उद्योग प्रालिका प्रोपाइटर हुन् । त्यसैले उनी ९ करोड रुपैयाँको कम्पनीको मालिक भनेर आफूलाई रमाइलोसँग प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
‘उहाँहरुलाई त अझै चिनिएन त,’ रघुले हाम्रो परिचय खोजे ।
‘उहाँहरु पत्रकार हो, शम्भु केसीले तयार पारेका नक्कली ऋणीको अवस्था के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न आउनु भएको रे, उता हाम्रो ड्याडीसहित अरु पीडितलाई भेटिसक्नुभयो, तपाईंसँग भेट गराइदेउ भन्नुभएकोले मैले ल्याएको,’ सागरले नै भने ।
नमस्कार दोहोर्यायौं । रघुकी श्रीमतीले भित्रै बसेर कुरा गर्न अनुरोध गरिन् । भित्र छिर्यौं ।
‘९ करोडको कम्पनीका मालिकको घर हो, मिलेर बस्नुपर्छ है बाबु,’ अब हाँसिमजाक गर्ने पालो रघुकी श्रीमतीको थियो । उनले यसोभन्दै दुईटा मुडा प्यासेजमा राखिदिइन् ।
मुडामा टुसुक्क बस्यौं । र, हामी आउनुको कारण खुलस्त पार्यौं । मिल्छ भने क्यामेरामा बोल्न अनुरोध गर्यौं । नभए पनि डायरीमा विवरण टिप्ने भन्यौं । उनीहरु क्यामेरामा बोल्न सहजै तयार भए । मानौं, आफ्नो पीडा पोख्ने हतारोमा थियो रघुको परिवार पनि ।
रघुले कोठामा बसौं भने । हामी छिर्दाको बायाँतिरको एउटा कोठामा भद्रगोल सामान थिए । दाहिनेतिरको एउटा कोठा बन्द थियो । अर्काे कोठा सायद भान्सा थियो । र, बाँकी रहेको बायाँतिरको कोठामा छिर्यौं, जहाँ २ वटा बेड राखिएको थियो ।
‘ब्याट्री राखेर मुटु चलाएको छ, डाक्टरले धेरै नबोल्नु भनेको छ, जति सक्छु, म आफैं बोल्छु, बाँकी यिनर्ले भन्छन्,’ एउटा बेडको छेउमा बसेर रघुले भने ।
उनको मुटुको धड्कन बन्द भएपछि पेस मेकर राखिएको रहेछ । र, उनले ‘यिनर्ले’ भनेको उनकी श्रीमतीले थप जानकारी दिन्छिन् भनेका रहेछन् ।
‘गाह्रो हुन्छ होला, तपाईं नबोल्नुस् न त’, हामीले भन्यौं ।
उनी आफै बोल्ने अडानमा रहे । खासमा भन्ने हो भने पेस मेकर राखिएको विरामीसँग कुरा गरेको पहिलो अनुभव थियो हाम्रो (सहकर्मी प्रकाश वाग्लेसहितको) ।
अनि रघु कार्कीले यसरी आफ्नो कथा सुनाए–
रघु क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक पवन कार्कीका ससुरा शम्भु केसीका बहिनी ज्वाइँ नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । उनी साँखुको साना गाउँमा बस्थे ।
शम्भुका ज्वाइँ पवनले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंक बनाउने पहल थाले । यसको लागि व्यालेन्ससीटको आकार ठूलो हुनुपर्छ भनियो । अनि पवन, उनका ससुरा शम्भुसहितको जग्गा कारोवारीको समूह आफ्ना नातागोता र चिनजानका व्यक्ति खोज्न थाले ।
यस्तैमा शम्भुको टोलीको नजरमा परे रघु । उनी सानागाउँमा खेती किसानी गर्ने सामान्य लेखपढ भएका व्यक्ति थिए ।
‘माओवादी सरकारमा आएको छ, मेरो जग्गा जमीन धेरै छ, केही जग्गा तपाईंको नाममा राखिदिनुपर्यो भने, मैले हुन्छ भनेपछि केही जग्गा मेरो नाममा पास गराए, पछि कम्पनी खोल्ने कुरा गरे, मैले त्यो पनि हुन्छ भनेँ, पछि त त्यही कम्पनीको नाममा ९ करोड रुपैयाँ ऋण निकालिएको रहेछ, मलाई त थाहै थिएन,’ रघुले विगत सम्झे ।
शम्भुले रघुको नाममा आरके स्टील एण्ड फर्निचर उद्योग प्रालि दर्ता गराए । त्यही प्रालिको नाममा क्यापिटलबाट ९ करोड रुपैयाँ ऋण निकालियो । ऋणको सावाँ व्याज नतिरेर कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा रघुलाई पाटन उच्च अदालतको आदेशले जेल हालियो ।
‘जेलमा ७ वर्ष बसेँ, म जेलमा परेपछि छोराले पढाइ विगारो, जेलमा हुँदा नै एकदम पेट दुखिरहन्थ्यो, छुटेपछि चेक गराउँदा मुटु चल्न छोडेछ, गंगालाल अस्पतालमा गएर मुटुको अप्रेसन गराएँ, अहिले व्याट्री राखेर मुटु चलाएको छ,’ रघुले भक्कानिदै भने ।
रघुले धेरैबेर कुरा गर्न सकेनन् । बीचमा उनको बोली रोकियो । बोल्न अप्ठेरो भएको संकेत गरे । अनि क्यामेरा बन्द गर्यौं ।
हामी उनकी श्रीमतीसँग कुरा गर्न लाग्यौं ।
‘पहिला जिउँदो बाँघ समातेर ल्याउन सक्ने हुनुहुन्थ्यो, जेलबाट छुटेर आएरपछि यो हालत भयो, अहिले काम गर्न त परै जावस्, राम्रोसँग कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्न,’ रघुकी श्रीमती भन्छिन् ।
‘शम्भुले बिराए, ससुराली पिराए’
शम्भु केसीलाई विश्वास गरेर फस्नेहरुको नामावली लामो छ । शम्भुले दाजुभाइ, ज्वाइँ, छिमेकी, ससुराली जस्ता नाता सम्बन्धका कसैलाई पनि बाँकी राखेनन् ।
हरिहर खड्का शम्भुका ससुराली पर्छन् । शम्भुको ससुराली गागलफेदीकाे सुवेदी गाउँ हो । सुवेदी गाउँका हरिहर नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएर बौद्धमा सेक्युरिटी काम गर्थे ।
‘बासुदेवले शम्भु भिनाजुलाई सहयोग गर्नुेपर्ने भयो भन्यो, आफ्नै नजिकको भाइले भनेको के नमान्नु भन्ने लाग्यो, मैले जागिर गरेको ठाउँमा नै आए, के के कागजमा सही गराए, पछि त यस्तो पो रहेछ उनीहरुको खेल,’ हरिहरले भने ।
हरिहरले बासुदेव भनेका शम्भुका साला बासुदेव खड्का हुन् ।
शम्भुको योजनाअनुसार नै हरिहरको नाममा केही जग्गा पास गरियो । उनको नाममा समृद्धि इन्भेष्टमेन्ट नामक कम्पनी स्थापना गरेर क्यापिटलबाट २९ असार २०६७ मा ९ करोड रुपैयाँ झिकियो र शम्भुकै समूहले चलायो ।
‘एक रुपैयाँ खाएको पनि होइन, बैंक देखेको पनि थिइनँ, ९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर हिनामिना गरेको आरोप रहेछ, त्यही आरोपमा ७ वर्ष जेल परेर निस्किएँ,’ हरिहरले भने ।
शम्भु केसीको जालमा परेका अर्का व्यक्ति हुन् विमल खड्का । उनको घर पनि सुवेदी गाउँ नै हो ।
‘छोरा कोकाकोला कम्पनीमा काम गर्थे, बासुले पहिला नै फसाएको रहेछ, छोराको कमाइ खाने यो बुढेसकालमा छोरालाई भेट्न जेल जानु परेको छ, खाएको न विराएको आरोप लागेछ, म कति अभागी रैछु,’ विमलकी आमा रिता भन्छिन् ।
विमलको नाममा पनि शम्भुले केही जग्गा पास गरिदिएछन् । र, सँगै सात्विक डेभलपर्स प्रालि नामक कम्पनी पनि खोलिदिएछन् । सो कम्पनीको नाममा क्यापिटलबाट २६ मंसिर २०६५ मा ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर शम्भुकै समूहले चलायो ।
‘जागिर राम्रै थियो, घरबार चलेकै थियो, बासु बुवाको उलामालामा लागेर जेल पर्नुभयो, सानो छोरा पढाएर हुर्काउँदै बसेकी छु,’ विमलकी श्रीमतीले भनिन् ।
भाइकृष्ण खड्का पनि शम्भुको ससुराली पर्ने सुवेदी गाउँकै हुन् । उनको नाममा शम्भुले सान्दर्भिक विल्डर्स प्रालि खोलिदिएर ९ साउन २०६६ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर आफैले चलाए । भाइकृष्ण पनि खाइ नपाइको ऋण बोकेर बसेका छन् ।
शम्भुका ससुराली पर्ने पुस्करको नाममा दुई किस्ता गरी ९ करोड रुपैयाँ ऋण झिकियो । पुस्करको नाममा पारिवारिक हाउजिङ डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलेर शम्भुको समुहले ३० मंसिर २०६५ मा १ करोड ७५ लाख र ८ वैशाख २०६६ मा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर चलायो ।
यस्तो थियो फसाउने सुत्र
शम्भु केसीले आफन्त र नातागोता व्यक्तिहरुले आफूसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको सुनाउँथे । जग्गा बढी भएकोले आफन्तको नाममा पास गरेर सुरक्षित राख्ने आफ्नो योजना भन्थे ।
सित्तैमा अर्काको जग्गा राखिदिदा के फरक पर्ला र भन्ने आफन्तहरुलाई पथ्र्याे । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले खाइदिन लागेकोले जोगाउन सहयोग चाहिएको कथा शम्भुले बुन्थे ।
जग्गा पास गरिसकेपछि शम्भुले उनीहरुको नाममा कम्पनी स्थापना गरिदिन्थे । कम्पनी स्थापना भएकोसम्म कसैलाई थाहा हुन्थ्यो भने कसैलाई योसम्म पनि थाहा हुदैनथ्यो ।
कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि त्यही कम्पनीको नाममा शम्भुले क्यापिटलबाट ऋण झिकेर फेरि जग्गा किन्थे । त्यो जग्गा फेरि अर्काे व्यक्तिको नाममा पास गराए फेरि त्यस्तै कम्पनी खोल्दै ऋण झिक्थे ।
भिडियाेः प्रकाश वाग्ले
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकलाई सिद्वार्थ बिजिनेश ग्रुप अफ हस्पिटालिटीमा विशेष छुट
एनएमबि बैंक बन्यो मादमे खोला जलविद्युतको मुख्य लगानीकर्ता, बैंकको मात्रै ३ अर्ब बढी लगानी
अब चेक तथा एटीएम बिनै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबाट एक लाखसम्म झिक्न सकिने
कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण अब अनलाईनबाटै तिर्न सकिने, सिधै तीन बैंकमा जम्मा हुने
ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो थप २ नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा